Torolàlana momba ny haino aman-jery sosialy ho an'ny matihanina ara-bola | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 16, 2013 Alatsinainy Oktobra 14, 2013 Douglas Karr
Marty Thompson mahita votoaty mahafinaritra foana momba ny asa sosialy. Raha mitady consultation arak'asa momba ny fampivelarana ny ezaka sosialinao ny orinasanao dia tsy mahafantatra mpanolo-tsaina tsara kokoa ao amin'ny orinasa aho. Amin'ity sary ity, ny torolàlana dia miantefa amin'ireo matihanina ara-bola. Imbetsaka, ny fikambanana ara-bola dia mahatsapa fa mifatotra ny tànany noho ny olana amin'ny fanarahan-dalàna - tena tsy izany mihitsy. Ireo matihanina ara-bola izay samy mampiasa ny haino aman-jery sosialy amin'ny fomba hendry ary manana ny fizotrany sy ny sehatra hijanonana ho mahatoky dia mahomby.
Araka ny fanadihadiana farany nataon'ny Advisor Touchpoints avy amin'ny Fikarohana Cogent, 87% ny mpanolotsaina ao amin'ny orinasa mandritra ny dimy taona na latsaka no mampiasa media sosialy (fiakarana lehibe nanomboka tamin'ny 2012), raha 35% monja amin'ireo izay nanao fampiharana nandritra ny 20 taona mahery no nirotsaka ara-tsosialy. Na mampiditra haino aman-jery sosialy amin'ny fampiharana ianao, miasa amina drafitra, na miandry ela kokoa, dia misy ny dositra azo antoka fa tsy tokony hodinihina.
Tags: teboka mpanolotsainafikarohana madinidinikaindostria ara-bolaplanner ara-bolamatihanina ara-bolahaino aman-jery sosialytorolàlana amin'ny media sosialy
Trapit: Fanamafisana ny atiny mandeha ho azy